Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguShane And Rhonda
Wamkelekile kweli khaya litsha lihlaziywe, linefenitshala ngokupheleleyo libekwe entliziyweni yeSicamous.
Eli khaya lihle likumgama wokuhamba ukuya ezivenkileni, kwiipaki / kwiindawo zokudlala, iibhayisekile / iindlela zokuhamba, iilwandle, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa, iShuswap kunye namachibi aseMara, kunye nebhloko enye kuphela ukusuka kwibala lemidlalo lasekhaya kunye nedayimani ye-baseball.
Indlu yeeNyoni yeeNgoma ikude ngemizuzu ukusuka kuzo zonke iintaba ezidumileyo zokutyibiliza, ineendawo ezininzi zokupaka izileyi, iitreyila kunye nezikhephe.
Ikhaya lakho leholide eligqibeleleyo leShuswap lilindile!.
Isanda kulungiswa, igumbi lokulala eli-5, igumbi lokuhlambela eli-3 lasekhaya elijikelezwe yimithi emihle kwindawo ezolileyo. Igumbi lokumisa ukomisa zonke izixhobo zakho emva kosuku lokuba sezintabeni. Jabulela ukucwina kwi-tub eshushu phantsi kweenkwenkwezi. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo lilungele ukulungiselela ukutya okumnandi. Iibhedi ezitofotofo kumagumbi okulala apholileyo ukuze ulale ngoxolo
Ukuba iqela lakho lijonge indawo egqibeleleyo yeShuswap yokubaleka, nakweliphi na ixesha lonyaka elineSicamous ekufuneka ibonelele, ke eli khaya lilungele ukonwabisa yindawo efanelekileyo yakho.
Nokuba ucebe usuku lokuhamba ngesikhephe, ukutyibiliza, igalufa okanye imvakwemini nje yokuphumla, eli khaya leholide aliyi kudanisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Shane And Rhonda
Sisoloko sikhona ukunceda iindwendwe zethu ngayo nayiphi na imibuzo. Sizama ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu zifumana okona kuhlala kukhululekile kunokwenzeka.
UShane And Rhonda yi-Superhost
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$234
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sicamous